Ugada abazukulu unina ‘eyobhenga’ | IOL Isolezwe
Umkhulu wa KwaMashu odinga ukusizwa ngezingane azigadayo.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
USEFISA ukuthi bathathwe ngabezenhlalakahle abazukulu bakhe ababili owesilisa waseNtuzuma ovele ashiywe yindodakazi yakhe nabo esuke “iyozibhengela” ize ibuye uma isithanda.
UMnuz Jabulani Cwera (47) odla amaphilisi okulapha inhliziyo njengoba ahlinzwa, uthi usefisa abazukulu bakhe, owentombazane onezinyanga eziyisishiyagalombili nowomfana oneminyaka emine ukuthi bathathwe ngabezenhlalakahle ukuze bakhule kahle.
UCwera uze waya emaphoyiseni aseNtuzuma efuna usizo ngoba ekhala ngokuthi indodakazi yakhe, eneminyaka engu-23 ivele ishiye lezi zingane noma amasonto amathathu kungaziwa ukuthi ikuphi, ahlale nazo aziphiphe azenzele konke ebe evele naye ezigulela.
“Ngihlukumezekile ngalezi zingane zomntanami, ngiyazithanda kodwa anginawo amandla okuzigada njengoba nami ngidla amaphilisi. Kungcono ukube kusakhona umama wami ngoba ngabe zinomuntu ozinakekelayo, manje nami angisenamuntu,” echaza.
Uthe indodakazi yakhe uma ibuya ivele iqambe amanga ithi kade isebenza, ingaphethe mali, iyifune kuye kodwa ebe ezwa ukuthi iyazingcebelekela ePhoyinti, isebumnandini.
“Kumele ngipatanise ngemali yami yempesheni yena uhola imali yeqolo kodwa izingane akazenzeli lutho. Angisakwazi nokuyozibambela amatoho manje ngigade lezi zingane. Noma ngingaziyisa e-creche angazi izophumaphi imali yokuzikhokhela,” kuchaza uCwera.
Uthe okubuhlungu akazi nokuthi kukuphi emakubo alezi zingane, ngoba indodakazi yakhe yafike yakhulelwa eyokuqala yayilaxaza kuye, ilokhu inyamalala.
UCwera uthe ize yabuya isikhulelwe ingane yesibili.
NgoLwesibili unikele esiteshini samaphoyisa eNtuzuma eyocela usizo lokuxhunyaniswa nosonhlalakahle bakwaMashu, kwa-E, okuthe uma amaphoyisa ebafonela ngehora lokuqala emini bathi akafike ngakusasa ngoba sebeyavala.
Omakhelwane bathi kubuhlungu okwenzeka kuCwera ngoba kwesinye isikhathi baze nabo bamlekelele kulezi zingane aseshiywe nazo.
Bathi njengoba egula nje futhi ewumuntu wesilisa akakwazi ukugada izingane ezincane kangaka, nabo babona ukuthi lezi zingane azivele zithathwe osonhlalakahle, unina aphucwe imali yeqolo.
Unina walezi zingane, uthe ubesebenza eThekwini njengoba bekunombukiso wezimoto iTopGear.